Depiote Fetra: “Tsy tokony hanao fahadisoana” | NewsMada
“Taona lehibe ho an’ny fitondram-panjakana ny 2021 hahazoany mamita ny dimy taona nifarahany amin’ny vahoaka. Raha tena hanatratra ireo tanjona nifanarahany amin’ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana mijoro, tsy manan-jo intsony hanao fahadisoana manomboka amin’izao taona 2021 izao” hoy ny depiote Rakotondrasoa Fetra. Na eo amin’ny lafiny fitantanana, tsy fananan’ny fitondram-panjakana intsony zo hanao fahadisoana, na toekarena na politika. Tena zava-dehibe ny fametrahana ny 2021 ho taon’ny asa.
Manitsaka ny antsasaky ny fe-potoam-piasany ny fitondram-panjakana. Zava-dehibe izay ahazoan’ny vahoaka mitsara ny fitondram-panjakana eo amin’ny antsasa-dalana. Zava-dehibe ihany koa izay ho an’ny fitondram-panjakana mijoro amin’ny fanamafisana ny ezaka tokony hotanterahina.
Raha tsy miray loha ny rehetra ao anatin’ny fitondrana, ho sarotsarotra ny hahatongavana any amin’ny tanjona. “Mihamafy ny lafiny rehetra amin’izay antsasaky ny fe-potoam-piasana izay satria manakaiky ny fifidianana hitsaran’ny vahoaka ny fitondram-panjakana”, hoy izy.
Eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena koa…
Eo amin’ny iraisam-pirenena, neritreretina ho taona 20/20 ny taona 2020. Tsy araka izany no nitranga fa 4/20 na 5/20 noho ny Covid-19. Nahazo an’izao tontolo izao tsy hiditra amin’ny fandrosoana izany. Tsy afa-bela i Madagasikara. Tsy maintsy hanarenana izay voka-dratsy naterak’izany ny taona 2021.
Amin’izao fotoana izao, mbola misy manao fihibohana, ireo firenen-dehibe. Aty Afrika, miverina tsikelikely amin’izany, ohatra, i Rwanda, i Seychellee, i Maurice… Tsy tonga amin’ny fiverenana amin’ny fihibohana i Madagasikara, ary irariana tsy ho amin’izany.